PLN - पोलिश मुद्रा
सबैभन्दा पुरानो युरोपेली मुद्रा, जो हाम्रो दिन पुगेको छ को एक, पोलिश ज्लटी छ। - पोल्याण्ड भन्ने तथ्यलाई बावजुद युरोपेली संघ को एक सदस्य, यस देशको नागरिक यसरी आफ्नो स्वयंसमर्थता देखाउँदै अप यसको राष्ट्रिय मुद्रा दिन छैन निर्णय गरेका छौं।
को ज्लटी को गठन
ज्लटी को पहिलो उल्लेख भएको XV शताब्दीको बीचमा हौं। रिव्निया, 48 मुद्रा बराबर छ - त्यतिबेला राज्य फरक मुद्रा प्रयोग। तर समय यो ज्लटी को दैनिक जीवन प्रवेश गर्न थाले। उहाँले लायक 30 मुद्रा को भेनिस ducats को बराबर हुन्छ। वास्तवमा, जबकि ज्लटी राष्ट्रिय शीर्षक सुनको ducats छलफल भएको थियो। को xvi शताब्दीमा देखि आर्थिक सुधार को पाठ्यक्रम मा, पोल्याण्ड को मौद्रिक एकाइ आधिकारिक नाम थियो। यो ज्लटी रूपमा चिनिन थाले।
सुरुमा, यो नोट 12 मुद्रा बराबर थियो, तर स्थिति सिक्का मा निहित चाँदी मा सुरक्षित गर्न थाले पछि, यो दर समय भन्दा 30 प्रतिशतले वृद्धि भएको छ, यसको मूल्य परिवर्तन भएको छ, उहाँले 50 मुद्रा बराबर थियो। को ज्लटी को इतिहास सीधा राज्य को विकास संग जोडिएको छ। तसर्थ, पोलिस मुद्रा धेरै परीक्षा भइरहेको छ। सिर्जना र पतन राष्ट्रमंडल, को अन्य राज्य संग विजय को युद्ध - यो सबै ज्लटी, को devaluing, त्यसपछि मूल्य मा हुर्काउन stirs। र अन्य मुद्राहरू को क्षेत्र मा राख्दै छैन ज्लटी को minting र परिसंचरण रोकिएको छ। पैदल र chasing रूसी हैकम आगमन, र यो संग रूसी रूबल साथ राष्ट्रिय मुद्रा जारी राखे। यस मामला मा, सिक्का अलेक्जेन्डर म को प्रोफाइल छवि, वा थियो रूसी साम्राज्यको हतियार को कोट।
1918 मा, डंडे पहिलो विश्व युद्ध को समयमा देश देखि आफ्नो बजार पहुँच भर छ कि सबै मुद्राहरू उन्मुक्ति निर्णय गरे। दैनिक जीवनमा एक स्थानीय ब्रान्ड प्रविष्ट, तर यो लामो पछिल्लो थिएन। छ वर्ष पछि, पोलिश मुद्रा - फेरि ज्लटी। यो समय उहाँले 100 मुद्रा गर्न समीकृत छ।
र हामी परिसंचरण कब्जा ज्लटी थिए पनि देश को क्षेत्रमा नाजी जर्मनी द्वारा पोल्याण्ड को पेशा समयमा वास्तवमा पछिल्लो डिजाइन संरक्षण। तर सिक्का एक जस्ता र फलाम मिश्र धातु बाट minted थिए।
को ज्लटी को एक नयाँ इतिहास
बस नयाँ बैंकनोट्स को नाजी पेशा बाट पोल्याण्ड को मुक्ति पछि परिसंचरण मा जारी गरियो। तिनीहरूले पछि reissued, र मात्र 1950 ज्लटी 100 को एक अनुपात मा नामकरण: 1। यो समयमा, नयाँ सिक्का शुरू छन्।
1974 देखि 1991 को लागि, बढ्दो आर्थिक संकट को दृश्य, त्यहाँ बैंकनोट्स 5000 र पछि 1 लाख र2लाख zlotys को उपस्थिति गर्न नेतृत्व गरेको छ जो ज्लटी, को मूल्यह्रास छ। हिट र को लागि एक सस्ता एल्यूमीनियम संग पीतल coining सामाग्री सफल सिक्का पारित।
पोल्याण्ड को आधुनिक मौद्रिक एकाइ 1995 मा पेश भएको थियो। यस मामला मा, ज्लटी 10,000 पल्ट मा नामकरण गरिएको थियो।
हिड्ने पुरानो बैंकनोट्स र सिक्का 1996 को अन्त सम्म जारी र त्यसपछि 2011 बैंकहरू नयाँ अप तिनीहरूलाई साटासाट।
आधुनिक ज्लटी उद्धरण
को ज्लटी संसारको रिजर्व को मुद्राहरू लागू गर्दैन भएकोले यसको परिसंचरण मात्र पोल्याण्ड द्वारा सीमित छ। राज्य युरोपेली संघ को एक सदस्य हो भन्ने तथ्यलाई बावजुद, सबै वित्तीय कारोबार देश भित्र राष्ट्रिय मुद्रा मा लगे छन् - PLN। यो रूपमा अघि, 100 मुद्रा मूल्यवर्ग 1, 2, 5, 10, 50 एकाइहरु कि minted छ। पनि सिक्का 1,2र5PLN मा जारी गरिएको छ।
सामान्य मा, मिति गर्न, पोलिश मुद्रा एकदम विश्व बजार मा स्थिर छ। अमेरिकी अलिकति प्रति डलर4zlotys र कम डलर विरुद्ध यसको विनिमय दर 1 यूरो4अलि साथ लागि लायक छ।
पोल्याण्ड गर्न डलर लिन चाहे?
पोल्याण्ड को मात्र मुद्रा, देश एउटा यात्रा को घटना, यो मनमोहक यूरो वा अमेरिकी डलर संग लिन हो - ज्लटी भन्ने तथ्यलाई बावजुद। आफ्नो विनिमय सजिलै सामान्यतया सार्वजनिक ठाउँमा स्थित र सुविधाजनक काम घण्टा छ छन् विशेष वस्तुहरू आयोग बिना गर्न सकिन्छ।
मुद्रा बंगलादेश। नाम को मूल। बैंकनोट्स र सिक्का को रूप
आईफोन6आईफोन6को आयाम: निर्दिष्टीकरण, मूल्यहरू, फोटो
हस्तशिल्प लागि जिप्सम कसरी रोपेर गर्न: चरण पुस्तिका द्वारा चरण
Lyubertsy रेस्टुरेन्ट: समीक्षा ठेगाना
किन सुनको झुम्का को सपना वा कसरी आफ्नो जीवन व्यवस्थापन गर्न?
कारण, लक्षण र asthenic-नसहरुको सिंड्रोम को उपचार
छालामा सेतो स्पटहरू (तनमा) किन देखा पर्दछ?